A Certain Magical Index – MMANIME
3 Seasons 74 Episodes
Created byKazuma Kamachi, Kiyotaka Haimura
StarringAki Toyosaki, Anri Katsu, Atsushi Abe, Ayumi Fujimura, Houchuu Ootsuka, Kimiko Koyama, Masaya Matsukaze, Mika Doi, Misato Fukuen, Nobuhiko Okamoto, Rina Satou, Satomi Arai, Satoshi Hino, Yoshihisa Kawahara, Yuka Iguchi, Yuko Kaida, Yumi Hara
Synopsis of A Certain Magical Index
Name – A Certain Magical Index
Source – Light novel
Genres – Action, Magic, Sci-Fi, Super Power
Duration – 23 min. per ep.
Rating – 17+ (Violence)
ဇာတ်လမ်းကိုတော့ နောင်နှစ် ၃၀ အကြာ၊နည်းပညာထွန်းကားတဲ့ “Acedamy City” ဆိုတဲ့ ကျောင်းအမျိုးမျိုးတည်ထောင်ထားတဲ့ မြို့ကနေအစပြုပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာနဲ့အတူ ကျောင်းသားတွေမှာလည်းစိတ်စွမ်းအင်လိုအရာမျိူးတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကျောင်းသားတွေထဲကမှ “Touma Kamijou” ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စွမ်းအားအဆင့် ၀ သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မသိမှာမသိတာက သူ့မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်မရှင်းပြနိုင်တဲ့ ” Imagine Breaker” ဆိုတဲ့ ဘယ်သဘာဝလွန်စွမ်းအားမျိုးကိုမဆိုပျက်ပြယ်စေနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ထိုအကြောင်းကိုသတိမထားမိဘဲTouma ဟာ သာမန်ကျောင်းသားဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေစဉ် တစ်နေ့မှာ” Index Librorum Prohibitorum” A.K.A ( Index) လို့ခေါ်တဲ့ Grimories ( မှော်စာအုပ်) ပေါင်းများစွာကိုအလွတ်မှတ်ထားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ လက်ထဲကနေ Index ကို ကာကွယ်ရင်းသူကိုယ်တိုင်လည်း ထူးဆန်းတဲ့သဘာဝလွန်စွမ်းအားတစ်မျိုးအပါဖြစ်တဲ့မှော်ပညာအကြောင်းကိုသိလာရတဲ့အခါမှာတော့…… ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ page မှာဆက်ပြီးကြည့်ရှုကြပါ။
Airs OnAT-X, MBS
Firt air date2008-10-04
Last air date2019-04-05
Home PageA Certain Magical Index
[Hentai] Yarimoku Beach ni Shuugakuryokou de!! The Animation
[Hentai] Aku no Onna Kanbu: Full Moon Night
[Hentai] My Household’s Liliana-san